မအူဝဲကို ကွညျ့ရတာ အသကျကွီးလာတယျလို့ကို မထငျရဘူး ဆိုတဲ့ နတေိုး – Askstyle
မအူဝဲကို ကွညျ့ရတာ အသကျကွီးလာတယျလို့ကို မထငျရဘူး ဆိုတဲ့ နတေိုး
နတေိုးကတော့ အိန်ဒွာကြျောဇငျနဲ့သူနဲ့ အသကျငါးနှဈလောကျ ကှာမယျထငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး မအူဝဲက အသကျကွီးလာတယျလို့ကို မထငျရတာပါတဲ့။
နတေိုးကတော့ အိန်ဒွာကြျောဇငျရဲ့ နုပြိုမှုကို ပွောပွလာတာပါ။ သူနဲ့ အသကျငါးနှဈလောကျ ကှာမယျလို့ ထငျရပမေယျ့လညျး အခုခြိနျထိ နုပြိုနတေဲ့ အိန်ဒွာကြျောဇငျကို အသကျကွီးလာတယျလို့ကို မမွငျမိဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။
“ကိုနတေိုးဆိုပွီး မအူဝဲက နောကျနောကျပွီးချေါတာ။ကြှနျတျောနဲ့ဆို ၅နှဈလောကျ ကှာမယျထငျတယျ။ သခြောတော့ မမေးမိဘူး။ အသကျမေးရငျတခြို့ကတြော့ စိတျဆိုးတတျလို့ မမေးဘူး(ရယျလကျြ)။ မအူဝဲက နုတယျလို့ ပွောလို့ရတယျ။ အရငျတုနျးက မွငျခဲ့တဲ့ ပုံစံအတိုငျးလေးလို့ပဲ ထငျမိပါတယျ။ ကွီးသှားတယျလို့ မထငျမိဘူး” ဆိုပွီးနိုဝငျဘာ(၂) ရကျနကေ့ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ Box no. 88 ပှဲမှာ ပွောပွခဲ့တာပါ။
အိန်ဒွာကြျောဇငျရဲ့ နုပြိုမှုကတော့ ပရိသတျတှအေားကရြလောကျပါတယျ။ အိမျထောငျရှငျအမြိုးသမီးတဈဦး ဖွဈပမေယျ့လညျး အခုခြိနျထိ သူမရဲ့ အလှအပကို ထိနျးထားနိုငျတာကလညျး အံ့သွဖို့ ကောငျးလှပါတယျ။ သူမကတော့ အခုလိုနုပြိုနတော ပြျောပြျောနတေတျတာကွောငျ့လို့ အငျတာဗြူး တျောတျောမြားမြားမှာ ဖွဆေိုဖူးတာ တှရေ့ပါတယျ။
မကွာခငျမှာလညျး သူတို့နှဈဦး ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ Box No.88 ဆိုတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီး ရုံတငျပွသတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့နှဈဦးရဲ့ အတှဲသရုပျဆောငျမှုကို လှမျးနတေဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျ ဒီကားလေးက အလှမျးပွစေမှောပါ။
“၂၀၁၉မှာ အမနဲ့အတူ သရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ ဇာတျကားက နှဈကားပေါ့။ ဒီကားကတော့ ၂၀၁၉ အတှကျ အမနဲ့ သရုပျဆောငျထားတာ နောကျဆုံးကားဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှကေလညျး အရငျတုနျးကတညျးက မှတျမှတျရရ ရှိခဲ့တယျ။ ကြှနျတျောတို့ကို ဟိုးအရငျကတညျးက အားပေးလာတဲ့ ပရိသတျတှကေိုလညျး ဒီကားလေးက အဈမနဲ့ နှဈယောကျ အရမျးကွိုးစားထားတဲ့ ကားလေးဖွဈတာကွောငျ့ အားပေးပါဦးလို့လညျး ပွောခငျြပါတယျ” လို့ နတေိုးက ဆိုပါတယျ။
နတေိုးနဲ့ အိန်ဒွာကြျောဇငျတို့ အဓိက ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ Box No.88 ဇာတျကားကို နိုဝငျဘာ(၆) ရကျနမှေ့ာ ရုံတငျပွသတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
Credit : Cele Yatkwat
နေတိုးကတော့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်နဲ့သူနဲ့ အသက်ငါးနှစ်လောက် ကွာမယ်ထင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မအူဝဲက အသက်ကြီးလာတယ်လို့ကို မထင်ရတာပါတဲ့။
နေတိုးကတော့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ နုပျိုမှုကို ပြောပြလာတာပါ။ သူနဲ့ အသက်ငါးနှစ်လောက် ကွာမယ်လို့ ထင်ရပေမယ့်လည်း အခုချိန်ထိ နုပျိုနေတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကို အသက်ကြီးလာတယ်လို့ကို မမြင်မိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
“ကိုနေတိုးဆိုပြီး မအူဝဲက နောက်နောက်ပြီးခေါ်တာ။ကျွန်တော်နဲ့ဆို ၅နှစ်လောက် ကွာမယ်ထင်တယ်။ သေချာတော့ မမေးမိဘူး။ အသက်မေးရင်တချို့ကျတော့ စိတ်ဆိုးတတ်လို့ မမေးဘူး(ရယ်လျက်)။ မအူဝဲက နုတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ အရင်တုန်းက မြင်ခဲ့တဲ့ ပုံစံအတိုင်းလေးလို့ပဲ ထင်မိပါတယ်။ ကြီးသွားတယ်လို့ မထင်မိဘူး” ဆိုပြီးနိုဝင်ဘာ(၂) ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Box no. 88 ပွဲမှာ ပြောပြခဲ့တာပါ။
အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ နုပျိုမှုကတော့ ပရိသတ်တွေအားကျရလောက်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်ပေမယ့်လည်း အခုချိန်ထိ သူမရဲ့ အလှအပကို ထိန်းထားနိုင်တာကလည်း အံ့သြဖို့ ကောင်းလှပါတယ်။ သူမကတော့ အခုလိုနုပျိုနေတာ ပျော်ပျော်နေတတ်တာကြောင့်လို့ အင်တာဗျူး တော်တော်များများမှာ ဖြေဆိုဖူးတာ တွေ့ရပါတယ်။
မကြာခင်မှာလည်း သူတို့နှစ်ဦး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Box No.88 ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ အတွဲသရုပ်ဆောင်မှုကို လွမ်းနေတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီကားလေးက အလွမ်းပြေစေမှာပါ။
“၂၀၁၉မှာ အမနဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားက နှစ်ကားပေါ့။ ဒီကားကတော့ ၂၀၁၉ အတွက် အမနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားတာ နောက်ဆုံးကားဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း အရင်တုန်းကတည်းက မှတ်မှတ်ရရ ရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို ဟိုးအရင်ကတည်းက အားပေးလာတဲ့ ပရိသတ်တွေကိုလည်း ဒီကားလေးက အစ်မနဲ့ နှစ်ယောက် အရမ်းကြိုးစားထားတဲ့ ကားလေးဖြစ်တာကြောင့် အားပေးပါဦးလို့လည်း ပြောချင်ပါတယ်” လို့ နေတိုးက ဆိုပါတယ်။
နေတိုးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Box No.88 ဇာတ်ကားကို နိုဝင်ဘာ(၆) ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။